Iza moa izahay - Tianjin Chunyuan Longrun Co., Ltd
Tianjin chunyuan longrun micro-fampidiran-drano Technical Co., Ltd dia naorina tamin'ny Desambra 2000, izay ny voalohany orinasa anjara amin'ny fampitomboana ny vokatra micro-fitarihan-drano sy ny rano-mamonjy vokatra fitarihan-drano. Ary ny orinasa manarona 33500 metatra toradroa, fanorenana faritra dia 25000 metatra toradroa.
Ny orinasa teo aloha fantatra amin'ny anarana hoe "Langfang Chunyuan Longrun Micro fampidiran-drano Engineering Co., Ltd, dia nifindra tany Wuqing Industrial Park tamin'ny 2009 sy anarana" Tianjin chunyuan longrun micro-fampidiran-drano Technical Co., Ltd ".
Isika no orinasa matihanina amin'ny fikarohana sy ny fampandrosoana, ny famokarana ny varotra sy ny fambolena rano-fahavaratra vokatra fampidiran-drano, ny fitaovana sy ny fotodrafitrasa, injeniera famolavolana, fametrahana sy ny fampiroboroboana ara-teknika.
Tao anatin'ny folo taona, orinasa no mba hivoatra sy hanana, araka ny namorona rafitra efatra, izany hoe:
Mitete rafitra fitarihan-drano Micro-fitarihan-drano rafitra fanaraha-maso lavitra mandeha ho azy Micro-fitarihan-drano ny rano sy ny fampiraisana sivana rafitra fitarihan-drano Micro-sodina Network rafitra
Isan-taona famokarana fahaiza izay namanay dia 350million metatra, mba hitsena ny fitarihan-drano ilain'ny 34million metatra toradroa ny micro-fitarihan-drano faritra. Ny vokatra dia nandinika ny firenena fisafoana kalitao, ny mpianatra A vokatra. Ny orinasa izay no lasa toetra ny ISO9001 rafitra fitantanana taratasy fanamarinana, ary izany dia ny fitarihan-drano sy ny drainage mpikambana ao amin'ny Association. Ny orinasa sy ny fanatsarana bebe kokoa eo amin'ny fampandrosoana ny efa misy fototra ho an'ny fambolena mahomby rano-famonjena.
Nahoana no nifidy antsika: 20 taona traikefa eo amin'ny Mitete rafitra fampidiran-drano, dia ataovy foana ny kalitaon'ny vokatra toy ny ambany rihana, satria tonga lafatra ny vokatra tsara, ny impeccable fanompoana varotra rafitra, ny orinasa efa nahazo laza tsara indrindra avy any ampitan-dranomasina sy ny mpanjifa ao an-tokantrano. Dia handray "Manatsara ny mpanjifa fahafaham-po" araka ny tanjona ny asa fanompoana ny mpanjifa Taloha sy Vaovao.
Tianjin Chunyuan Longrun Micro-fampidiran-drano Technical Co., Ltd Tonga soa ny fitsidihana!